Nuki, ny hidy marani-tsaina mifanentana amin'ny HomeKit | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | Fitaovana IPhone, HomeKit, maro
Smart hidin-trano dia tonga tsikelikely amin'ny automatique an-trano ny tranontsika, saingy miatrika fisalasalana maro amin'ny mpampiasa izy ireo noho ny fisalasalana momba ny filaminana, ny tahotra fametrahana sarotra ary ambonin'izany rehetra izany, ny fahasahiranana midika hoe tsy maintsy ovaina ny hidin-trano tany ny tranonao. Nuki dia manolotra antsika ny hidiny marani-tsaina izay te-hamarana ireo olana rehetra ireo amin'ny tsindry iray, satria Izy io dia manana fiarovana natolotry HomeKit, tsotra be ny fametrahana azy ary azonao atao koa ny mitazona ny hidinao tany am-boalohany, tsy manova ny lakile. Nosedraina izahay ary manazava ny zavatra rehetra eto ambany.
Afaka nizaha toetra ny Kit feno izay ahitana ny Nuki Smart Lock 2.0 (hidin-trano maranitra), Nuki Bridge (tetezana) ary Nuki FOB (fanaraha-maso lavitra). Ny hany zavatra tena ilaina dia ny hidin-trano marani-tsaina, ary samy tsy voatery ny tetezana sy ny mpanara-maso.
2 Tetezana Nuki
4 Fampiharana Nuki
Ny hidin'i Nuki marani-tsaina dia mitondra automatique mody any am-baravaranao nefa tsy mila manao fametrahana sarotra na manova ny hidinao, zavatra izay fahombiazana araka ny hevitro. Marina fa somary "marokoroko" kokoa ny endriny raha oharina amin'ny maodely hafa, saingy vidiny faran'izay kely indrindra izany ary omena fahafinaretana hatramin'ny fotoana nahavitanao ny fametrahana tao anatin'ny 5 minitra fotsiny nefa tsy mila manova ny lakilen'ny fianakaviana iray manontolo. Ao amin'ny horonan-tsary dia azonao atao ny mahita ny fizotran'ny fametrahana iray manontolo nanazava amin'ny antsipiriany. Raha vantany vao tafapetraka dia tazominay ny rafitra fanokafana manual, toy ny varavarana mahazatra rehetra, fa hanana ny fahafaha-mampiasa ny iPhone sy HomeKit ihany koa izahay, noho izany dia mety ho an'ireo trano izay iaraha-miaina ireo mpitia sy tsy mino ny mandeha ho azy ao an-trano.
Ao anaty boaty izahay dia manana izay ilainao rehetra hametrahana azy eo am-baravaranay, sy amin'ny tranokalanao (rohy) azontsika atao ny mahita raha mifanaraka ny hidin-tsika, zavatra tena atoro anao hataonao alohan'ny ividiananao azy. Ny hidin-trano dia mifandray amin'ny alalàn'ny Bluetooth 5.0 amin'ny iPhone, izay mazava ho azy fa tsy maintsy akaiky azy isika, ary raha te hampiditra azy io amin'ny HomeKit isika, dia mifandray amin'ny Apple TV, iPad na HomePod antsika ihany koa, izay ivon'ny fidirana lavitra. Miasa amin'ny bateria AA efatra izy io, azo soloina mora foana. Anisan'izany ny fanokafana varavarana sy sensor fanidiana.
Tetezana iray izay mampifandray amin'ny hidinao amin'ny alàlan'ny Bluetooth sy ny tamba-jotra WiFi anao, mamela ny fidirana lavitra mankany amin'ny hidiny tsy mila HomeKit. Raha manana HomeKit ianao dia tsy ilaina ny tetezana, saingy manome anao asa fanampiny fanampiny toy ny fampandrenesana anao fa nandao ny trano ianao nefa tsy nanidy ny lakile. Azonay atao ny mamintina azy toy ny hoe te hampiasa ny app iOS Home ianao dia tsy mila ilay tetezana, fa raha te hampiasa ilay app Nuki sy ireo fiasa eo am-pialana amin'ny hidin-trano ianao dia mila azy.
Fanaraha-maso lavitra kely ahafahanao manokatra sy manidy ny hidy tsy misy fanalahidy, mety hanomezana vahiny na ankizy ary manokatra ny hidiny nefa tsy mila fanalahidy na finday finday avo lenta.
Nuki dia manolotra antsika ny fampiharana azy hampiasa ny hidin-trano. Azontsika atao ny manokatra sy manidy azy io miaraka aminy, fa hanana asa hafa mandroso kokoa ihany koa isika, toy ny fahafaha misokatra ho azy rehefa akaiky ianao, nefa tsy mila manandratra rantsantanana, avelao ny olon-kafa hanokatra vonjimaika na mandritra ny fotoana tsy voafetra, hijery ny vatan'ny fisokafana sy ny fanidiana ataon'ny mpampiasa, mahazo fampandrenesana isaky ny manokatra sy mihidy ny varavarana, na fandaharana ny hidin-trano hidina ho azy rehefa miala ianao. Ho an'ireo asa mandroso rehetra ireo dia inona no ilàna ny tetezana Nuki.
Ny fiasan'ny rindranasa dia maivana, ary raha vantany vao mivezivezy ianao dia ho azonao atao ny manamboatra azy io araka ny itiavanao azy amin'ny fampiasana ireo fiasa tianao hampiasaina, ary mampihena ireo izay tsy tianao. Haingana ny valin'ny hidin-trano, na dia tsy maintsy miandry ny motera aza ianao hamoha ny varavarana, izay maharitra segondra vitsy kokoa noho ianao raha nanao izany tamin'ny fanalahidy ... raha mbola tsy mila mandehandeha ianao ny kitaponao na valizy. Ary rehefa vitanao ny manokatra ny hidim-baravarana, dia manokatra ny "fiteau" mandritra ny segondra vitsy koa ny varavarana mba hisokatra na mila manery fotsiny ianao, Ka raha feno ny tananao dia tsy hanana olana amin'ny fidirana.
Ny fampidirana amin'ny sehatra Apple dia vita amin'ny alàlan'ny ivon-toerany mahazatra (Apple TV, HomePod na iPad). Ny fampifandraisana azy amin'ny sehatra Apple dia midika hoe afaka mamorona automatique miaraka amin'ny kojakoja hafa, toy ny lazao hoe "Good night" dia maty ny jiro rehetra ary ny hidim-baravarana. Ireo marika NFC hanokatra varavarana sy handrehitra jiro, ampiasao Siri hifehezana ny hidy amin'ny feonao ... ny mety rehetra atolotry ny HomeKit dia mety amin'i Nuki, ary vaovao tsara izany. Ary koa, araka ny efa nolazainay, raha mampiasa HomeKit ianao dia tsy mila ilay tetezana hahazoana fidirana lavitra.
Ho fepetra fiarovana, tsy afaka mamoha ny hidin-trano Nuki fotsiny ianao amin'ny iPhone tsy voahidy anao na avy amin'ny Apple Watch napetraka eo amin'ny tananao ary voahidy. Tsy izany no atao amin'ny HomePod, izay afaka manidy azy nefa tsy manokatra azy, satria tsy fantany raha omena alalana hanokatra varavarana ilay manome torolàlana.. Mba hamelana olon-kafa hanokatra ny varavarana amin'ny iPhone dia tsy mila mizara ny tranonao amin'izy ireo ianao ary manome azy ireo fidirana.
Amin'ity famerenana ity dia nifantoka tamin'ny fampifanarahana azy amin'ny HomeKit izahay, fa Nuki koa dia mifanentana amin'ireo sehatra roa hafa ho an'ny automation an-trano, na Alexa's Amazon na Google Assistant.
Ny hidin-trano Nuki dia nahavita nandresy ireo fihemorana lehibe tamin'ny maodely hafa: fametrahana mora, tsy manova ny hidin-trano sy amin'ny fiarovana atolotry HomeKit antsika. Zava-dehibe koa ny fahalalana fa raha tsy mahomby ny teknolojia dia azonao atao foana ny mampiasa ny maody fanokafana manual. Fandidiana tena malefaka sy valiny haingana, ary ny fahafaha-manao betsaka atolotry ny HomeKit antsika amin'ny resaka tontolo iainana sy ny mandeha ho azy dia mamita fitaovana iray izay mety ho voa fotsiny amin'ny hoe mitabataba rehefa manokatra na mihidy, zavatra tsy midika akory izany amin'ny lafiny iray tsy misy olana. Miovaova arakaraka ny kitapo ividianantsika ny vidiny:
Nuki Smart Lock 2.0 € 229,95 (rohy)
Nuki Smart Lock 2.0 + Nuki Bridge € 299 (rohy)
Nuki FOB € 39 (rohy)
Fametrahana mora nefa tsy manova hidin-trano
Mifanaraka amin'ny HomeKit, Alexa ary Google Assistant
Fanamorana ny fikirakirana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Nuki, ny hidy marani-tsaina mifanentana amin'ny HomeKit
Octavio Javier dia hoy izy:
Azo vohaina avy any ivelany miaraka amin'ny lakile ve izany?
Valiny tamin'i Octavio Javier
Raha mila mamela lakile ao anaty varingarina ianao mba hiasa, ahoana no ahafahanao mampiditra lakile avy any ivelany raha tsy mandeha izy.
DavidM dia hoy izy:
Ho an'izany dia mila fiarovana ny bowler. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia azonao atao ny mamoha ny varavarana avy any ivelany na dia misy lakile ao anatiny aza. Tena ilaina!!!
Valiny tamin'i DavidM
Felipe vidondo dia hoy izy:
Ao amin'ny hidiko dia manana jiro ambony fiarovana aho izay raha manana ny lakile ao anatiny dia tsy azon'izy ireo atao ny mametraka ny lakileny, lazao amiko izay mety hitranga amin'ity takamoa ity. Te hahafantatra aho raha mivoha avy any ivelany amin'ny alàlan'ny finday na miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra ny hidin-trano rehetra, misaotra anao, tiako ho fantatra koa raha miara-miasa amin'ny Android sy iPhone amin'ny fotoana iray izy
Valiny tamin'i Felipe Vidondo
Ny kalitaon'ny feon'ny AirPods Pro vaovao dia mbola tsy mandresy ny Galaxy Buds, hoy ny Consumer Reports